I-China Pickle Pot Factory kanye Nabakhiqizi | UChuancheng
Iphelele ekuphekeni kwakho kanye nasezithako zokubhaka ezinjenge-pasta, penne, ubhontshisi owomile, ilayisi, ibhali, ama-crackers, ikofi, itiye, amantongomane noma ukulondolozwa amakhambi akho owathandayo, izithelo nemifino kanye nezinhlaka. Ingilazi yethu ekhishini ingilazi isethwe kahle futhi futhi.
Ukudla okugciniwe kuzohlala kusha isikhathi eside kakhulu nge-lid yethu ye-airtight ne-silicone gasket lock. Ingilazi ecwengekile ikuvumela ukuthi ubone okungaphakathi nokuthi ukudla okugciniwe kuhamba kanjani.
Imbiza yonke yenziwa ngezinto ezisezingeni lokudla, ezihlala isikhathi eside futhi zisebenziseka kabusha, zihlanzekile futhi zingenabo ubuthi, ngeke zifake amakhemikhali ayingozi ekudleni noma kumunce ukunambitheka ngemuva kokusebenzisa okuningi.
Kuhle kwe-Canning - Iphelele ukulondolozwa nokugcotshwa kwabathandi; le jar yokugoqoza yenzelwe futhi yalingana ukuwafaka ukhukhamba owenziwe ekhaya, amapentshisi, upelepele, ujamu, ama-jellies, ukulondolozwa, amasosa utamatisi, isalsa, umhluzi nokunye okuhlukahlukene.
Ilungele Ukugcinwa - Ukugcinwa okuhlelekile futhi okuvuselelekayo kokudla okwomile noswidi njengoshukela, ilayisi, i-oats, ufulawa, i-pasta, amakhukhi, ama-crackers kanye noswidi. Isembozo se-airtight sensimbi sihambisana ne-bpa-free plastisol yensimbi eqinile egcina ukudla kusha futhi kunwebisa impilo yayo eshalofini. Imbiza futhi ithuluzi elihle lokuhlelela noma yiziphi izinto ezixegayo ofuna ukuzigcina ngendlela ehlelekile.
Isilo Esijwayelekile - Umlomo wamasentimitha angu-2 ¾ wenza kube lula ukubeka izithelo nemifino enjenge-beet namatamatisi esitsheni. Ukuvuleka okubanzi kuvumela ukutholakala kalula ezansi kwejazi ukuze kube lula ukuhlanza ngokucophelela ngesandla ngesiponji.
Ikhwalithi yeNgilazi - eyenziwe ngengilazi ye-lime esezingeni eliphakeme enqaba ukuqhekeka nokuqhekeka. Ingilazi yethu i-washwasher iphephile futhi i-microwave iphephile ngaphandle kwesivalo. le mbiza yengilazi inokudla okungu-100% okuphephile futhi okuholelekayo kokugcina ukudla okunempilo nokuphuza isiphuzo.
I-Glass Ecacile - Ingilazi ngayinye ye-mason ingilazi yenziwa nge-crystal ekhanyayo, engenasici ukuze iqinisekise ukubonakala okuphezulu kakhulu okukuvumela ukuba ubone kalula okuqukethwe kwe-jelly jar futhi unqume ukuthi ngabe zonakele. Lezi zimbiza ezibushelelezi futhi ziyisitishi esihle kakhulu sokuhlobisa ngemihlobiso yezobuciko nezobuciko, ukuthandwa komshado nephathi, namanye amaphrojekthi we-DIY.
Esedlule: Ibhodlela Lezinyosi
Olandelayo: Amathini wamakhandlela
Amabhodlela Engilazi Wamabhule
Ingilazi Yesigaxa sePotle
Izimbiza Zokugcina Amatshe
I-130ml ingilazi kasawoti kanye nebhotela lezinongo le-pepper
I-Manual Abrader Kitchen Grinder Jar Ingilazi Yomzimba S ...
I-Pepper Grinder noma iSalt Shaker
I-Crystal Candy Jar ne-Lid, Isula i-Glass Food St ...